Ciidamo reer Puntland iyo Itoobiyaan isugu jira oo meydkooda lagu jiiday magaalada Muqdisho, walaac soo food saaray ciidamo ka tirsan dowladda federaaka ah oo ka soo jeeda beelaha USC iyo qaar ka tirsan waxgaradka beelaha Hawiye oo la sheegay ay daneynayaan sidii ay dagaal ugu qaadi lahaayeen Puntland marka ay ciidamada Itoobiya ka baxaan Soomaaliya. Ruunkinet 21/03/07
Dagaal qaraar oo maanta ku dhex maray agagaarka wasaaradda Gaashaan dhigga ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in ay ku dhinteen dad badan oo isugu jira rayid iyo ciidamadii dagaallamayay.
Dad rayid ah oo ka badan 13 ruux ayaa la sheegay in ay ku dhinteen dagaalkaasi ayadoo 85 ruux oo kalena ay ku dhaawacmeen.
Magaalada Muqdisho xaafdo ka tirsan ayaa lagu arkayay meyd isugu jira sida la sheegay maleeshiyaad laga keenay Puntland iyo ciidamada Itoobiya oo la gubay dhulkana lagu jiidaya.
Dad careysan oo diidan qabsashada Itoobiya ay ku qabsatay Soomaaliya iyo ciidama beeleedka reer Puntland oo la sheegay in ay ujeedadoodu tahay aar goosi ayaa dhulka ku jiidayay meydadkaasi ayagoo sida la sheegay ku qeylinayay Soomaaliya Soomaalibaa leh.
Sidoo kale, ciidama ka soo jeeda beelaha USC-da oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ayaa la sheegay in ay aad u walaacsan yihiin.
Ciidamadan ayaa la sheegay in ay ka walaacsan yihiin in dhabarka ay ka toogtaan ciidamada reer Puntland oo aan kala jecleyn ayaga iyo kuwa ay la dagaalamayaan.
Ciidamadani ayaa la sheegay in la arkayay ayagoo koox koox u wada hadlaya si ay arrintaasi uga foog jignaadaan haddii uu dagaalku ballaarto.
Dagaalkii saakay ka dhacay agagaarka wasaaradda Gaashaandhigga loogana xoog roonaaday ciidamda Itoobiya iyo kuwa dowladda ayaa haatan u wareegay dhinaca suuqa xoolaha ayadoo la filayo in ku faafo degmooyin kale oo ka tirsan magaalada Muqdisho.
Dhinaca kale, waxgarad ka tiran beelaha USC ayaa haatan ka wadahadlaya sidii weerar culus loogu qaadi lahaa Puntland marka ugu horeysa ee ay ciidama Itoobiya Soomaaliya.
Wargaradkan ayaa la sheegay in ay shirar gooni gooni ah u yeesheen Soomaaliya iyo degmooyin ka tirsan Yurub.
Arrintan ayaa ka dambeysan markii ay wax garadkani u arkeen in reer Puntland badidoodu ay ka go'an tahay in ay xoog ku xukumaan dalka isla markaan bara kiciyaan beelaha USC ee ku nool koonfurta Soomaaliya.